Mmetụta nke Sputtering lekwasịrị ịdị ọcha na ịdị n'otu nke ihe anya na mmepụta mkpuchi mkpuchi mpaghara
E kwuola ihe nchịkọta akụkọ nke mkpuchi nke ihe ebum n'uche, na usoro ịgbasa, ịdị mma nke ebumnobi ebumnobi dị elu karịa nke ụlọ ọrụ ihe eji eme ihe .. N'isiokwu a, onye nchịkọta akụkọ ga-aga n'ihu na-ewebata mmetụta ịdị ọcha na ịdị n'otu nke ihe elekwasịrị anya na mkpuchi nnukwu mpaghara. Bịa mụta maka ya ~
Ịdị ọcha nke ihe a na-atụ anya nwere mmetụta ka ukwuu na arụmọrụ nke ihe nkiri a ga-ekpuchi., ma ọ bụrụ na ịdị ọcha nke ihe elekwasịrị anya ezughị, ihe ndị na -adịghị ọcha na ihe a na -atụ anya ga -arapara n'elu enyo n'oge usoro ịgbasa n'okpuru ọrụ nke ọkụ eletrik na oghere ndọta.. Ihe nkewa pụtara nke ọma. Ya mere, nke dị elu nke ịdị ọcha nke ebumnuche, ọ ka mma ịrụ ọrụ nke ihe nkiri echekwara.
Maka ebumnobi na -adịghị mma na -ekpo ọkụ ọkụ, dị ka ebumnuche SiA1, ọnụnọ nke adịghị ọcha na ebumnobi na -ebutekarị mbufe ọkụ, ma ọ bụ ihe dị iche n'etiti mmiri jụrụ oyi eji arụpụta yana ezigbo ahịrị mkpuchi mmiri mmiri, wdg, na -eme ka ebumnobi ya gbawaa mgbe eji ya eme ihe. Obere mgbawa agaghị enwe mmetụta dị ukwuu na mmepụta mkpuchi. Otú ọ dị, mgbe enwere mgbawa doro anya na ihe elekwasịrị anya, ebubo dị mfe itinye uche na nsọtụ akụkụ mgbape, nke ga -ebute mwepụ na -adịghị ahụkebe n'elu ebe a na -atụ anya..Ọdịdị mgbapụta ga -eme ka ndapụta slag, nhazi ihe nkiri na -adịghị mma, na mmụba ngwaahịa na -abawanye, na usoro ịkwadebe ebumnobi, na mgbakwunye na ịchịkwa ịdị ọcha, ekwesịrị ịchịkwa ọnọdụ usoro nkwadebe.
Maka ebumnuche alloy, nkesa ihe na -ahaghị nhata na -emekarị, dị ka agglomeration aluminom na ebumnuche SiAl, nkewa nke aluminom na ebumnuche zinc-aluminom (atọm atọm nke aluminom bụ 27 obere karịa atọm uka nke zinc 65, na aluminom na -ajụ oyi n'oge usoro jụrụ oyi mgbe ịwụsasịrị. Ga -ese n'elu, na -eme ka ọdịnaya aluminom dị elu n'otu akụkụ dị ala n'otu akụkụ).N'ihi ntakịrị agbaze ebe, Al nke agbagoro agbagọ na ebumnuche SiA1 na -adị mfe nsị mgbe a na -agbasa usoro ịse ihe nkiri, na ego A1 agbakwunyere n'oge usoro ịgba mmiri bụ ụfọdụ. Mgbe akụkụ nke agglomeration pụtara, ọ na -egosi na ọdịnaya aluminom n'ebe ndị ọzọ pere mpe, nke na -emetụta ebumnuche SiA1. The thermal conductivity na eletriki conductivity nke ihe nkiri, na -ebute ọnụego na -ekwekọghị ekwekọ, ịdị n'otu ihe nkiri adịghị mma, cracking nke lekwasịrị ihe, na -akawanye njọ nke mwepụ ihe ezubere iche, na ibelata ogo ịse ihe nkiri.Nkekọrịta nke ihe ndị e lekwasịrị anya ga -emetụta ọnụego ịgbasa (Ịdị n'otu ihe nkiri) na ihe nkiri. N'ihi ya, na mgbakwunye na ịchịkwa ịdị ọcha nke ihe elekwasịrị anya, nkesa nke ihe dị na ngwakọta alloy dịkwa ezigbo mkpa.
Prev: Kedu ihe kpatara ihe nkiri ngwaahịa a ji ada n'oge mkpuchi mkpuchi ？？
Next: Kedu ka njupụta na porosity nke ihe elekwasịrị anya si emetụta ogo mkpuchi ？？
» Kedu ka njupụta na porosity nke ihe elekwasịrị anya si emetụta ogo mkpuchi ？？
» Mmetụta nke Sputtering lekwasịrị ịdị ọcha na ịdị n'otu nke ihe anya na mmepụta mkpuchi mkpuchi mpaghara
» Kedu ihe kpatara ihe nkiri ngwaahịa a ji ada n'oge mkpuchi mkpuchi ？？
» Isi nke ebumnuche ITO
» Kọwaa ihe ọmụma nke ịsụ sputtering target medium frequency magnetron sputtering
» Ọhụrụ ụdị titanium-aluminum alloy lekwasịrị n'ichepụta usoro
Kedu ka njupụta na porosity nke ihe elekwasịrị anya si emetụta ogo mkpuchi ？？
Kedu ihe kpatara ihe nkiri ngwaahịa a ji ada n'oge mkpuchi mkpuchi ？？
Isi nke ebumnuche ITO
Kọwaa ihe ọmụma nke ịsụ sputtering target medium frequency magnetron sputtering